COVID-19 Yovharisa Mabhangi, Makereke, Mabasa, Makiriniki - HealthTimes
COVID-19 Yovharisa Mabhangi, Makereke, Mabasa, Makiriniki
July 20, 2020 Cathrine Murombedzi
● ZVINO kana ana chiremba nemanesi vobatwa nedenda reCOVID-19, ndiani acharapa nekupepa varwere?
Mai vatsva musana, mwana atsva kudumbu. Dai waro zvaibvira, shuramatongo yanyenyeredza varapi vedu munguva ino vagona kuramba vachitipepa sezvavakadzidzira nekupikira. KuBulawayo chipatara chikuru, cheUnited Bulawayo Hospital (UBM) chakazivisa kuti varapi gumi nevasere vaive vabatwa nechakapedza mbudzi, COVID-19. Tine tarisiro yekunaya kwavo nekukasika vadzoke mundima yavo irikudai kurema. Tinopa kutenda kukuru kunemi mose varapi vedu munyika yedu ino.
● Nharire yeutano yeCimas, inove homwe inokandwa mari neruzhinji runogadzirira hurwere hwamangwana yakavhariswa musuo nedzihwa ratekeshera pasi rese mushure mekunge mushandi waro anoshandira mberi kugashiravaenzi akaonekwa aine utachiona hweCOVID-19. Cimas ine makiriniki akatekeshera munyika ino, motokari dzinotakura varwere, marebhu anovheneka chikonzero chaita musoro ubande, kuzunza pabva zvirwere mukuongorora ropa neutsanzi hwekuzongotadza kumutsa vakafa vakavhariswao misuwo nedenda reCOVID-19 kekutanga munyika ino. N’anga huru haizvirape, Cimas yakatodaidzao vanoongorora denda reCOVID-19 kuti richenure vashandi varo.
Mukuru wesangano iri vaVulindhlela Ndlovu vakati ferefeto iyo yavakaita paive pasina arwara, kwaive kungogara wakachenjera sezvo ngoma irikurira isina ndinoziva.
Zvakaonekwa kuti vashandi makumi maviri nemumwechete (21) vanotakurwa nebhazi rinotakurao mushandi wekutanga kuwanikwa aine denda rapinza chando, vanoshandisa nhare uye makompiyuta mamwechete naye vakawanikwa vahakira denda iri rinotekeshera nemugamuchidzanwa.
Vashandi vemuhofisi ndivo vakawanikwa vaine utachiona uhu, manesi, madhokotera, kana vanopa mishonga vese havana dzihwa iri. Izvi zvaratidza kuti vashandi ava vemumahofisi havasi kutevedzera chenjedzo yakatarwa sezvinotarisirwa…tava nehomwe inotakura denda reCOVID-19… naizvozvo mbereko iyi ichavatakura vashandi ava nenhengo dzedu dzinowirwa nehurwere uyu. Tinotarisira kuita zvakanaka kwevashandi vese ava nekukasira,” vaNdlovu vakazivisa mutsamba yavo.
● Bangi reNMB rakazivisa kuvharwa kwebhangi ravo rekuSoutherton, Harare, mushure mekunge mushandi wavo akapindwa nedzihwa rinorwadza reCOVID-19 munguva yapfuura. Kutaura kuno arere nekuda kwedenda iri. “Dura reSoutherton richange rakavhara kubva musi wa20 July kusvika musi we 3 Nyamavhuvhu..,” Benefit Washaya, chamangwiza webhangi iri akazivisa. Vamwe vashandi vari kuvhenekwa kuti havana kubatirao here denda iri risina mukuru, mudiki, muchena, mubvakure kana ambuya.
Vanozivisa kuti mamwe mabhangi avo ese achange achishanda. Vanotora mari nemumambure havana dambudziko ravanowana.
● COVID-19 inobatira nekukwazisana, kugara pedyo neanedenda iri mukataura, kuhotsira, kushandisa midziyo imwechete. Nekuda kwekutambarara nyore kwedenda iri, vanhu vanokurudzirwa kugeza maoko nemvura inochururuka nesipo, kupfeka masiki kana uri pane vamwe, kusakwazisana mumaoko, uye kugara kudzimba. Nekuda kwebasa, vamwe vanowanikwa vachienda kumabasa, vanofanira kuita zvataurwa kuchengetedza utano.
● Sangano rinokotsvera nekukurudzira utano guru rePremier Service Medical Aid Society PSMAS ravharao musiwo kumuzinda wavo mukuru wemuHarare. Izvi zvakaziviswa naEng TNH Kapumha mukuru wesangano iri.
“Tinokuzivisai kuti vashandi vemuhofisi yedu vaviri vakawanikwa vaine COVID-19. Vari kupepwa vari kumba. Tinotarisira kuti vanaye nekukasika…,” Eng Kapumha vakazivisa mutsamba.
Mamwe mapazi mumaguta ese arikushanda. Harare muzinda mukuru wavo ndiwo urimushishi yekukweshwa, kupfapfaidza, kugeza sezvakatarwa nesangano repasi rese reutano re World Health Organisation (WHO). PSMAS inezvipatara nemakiriniki zvakare. Vaonekwao vaine denda musangano iri vashandi vemuhofisi zvakare.
● Baba vezvemweya Kennedy Muguti, vanotungamira kereke yeRoma yeSacred Heart iri munhongonya yeguta reHarare vakazivisa kuti vatendi makumi mashanu vanobvumirwa kupinda svondo vambovhura mabhaibheri vari kudzimba. Vakapa chiziviso ichi mutsamba zvakare mushure mekunge kereke iyi yarasikirwa nemutendi mumwechete.
● Vanotipa tsvigiri vanozivisa kuvharwa kwegapu renhapitapi kwezvizuva zvishomana, vashandi vachinangiswa kuti havana besa ere.
“Kana putu gadzike yacho isina tsvigiri unotsvirei?” StarAfricaCorporation yakazivisa kuti vashandi vavo vana vakawanikwa vaine besa reCOVID-19 pachiManyika. “Tine urombo kuti umweni wacho wakatisiya ngekuda kwebesa irori…tinoti ngematambudziko nemakushata akadayi aya,” apakuri ezvinotapira akanyora mutsamba.
● KuKaguvi, sangano reZimStat, rine mahofisi makuru muguta reHarare, rakaziwisazve kuvhara mikowa mushure memabhazi awo anobve Chitungwiza kuuya kumushando azi agezwe hosha yakapfuura nemo kusvikira kubasa ederedzwe.
“Tinoziwisa kumbomiswa kwechironga chatanga tichida kuita chekuwerenga nzvimbo icho tinoto pachingezi “mapping” kumiswa kwacho. Vashandi vedu vakaonekwa vaine besa reCOVID-19,” vaTaguma Mahonde vakanyeurira.
VaMahonde, chamangurangura weZimStat vakanyora itori tsamba yechenjedzo kuvashandi vari pasi pavo vese.
Kumushandi wese kuwarira. Denda iri harionekwi nemaziso, rinofamba mumhepo.
Ngatikurukureyi mumambure: cathymwauyakufa@gmail.com